News Collection: 'आकासको फल हासिल गरेँ' - सदीक्षा श्रेष्ठ, मिस नेपाल २०१०
'आकासको फल हासिल गरेँ' - सदीक्षा श्रेष्ठ, मिस नेपाल २०१०
१.आकासको फल आँखा तरी मर
यो उखान सही छैन। हामीले ठूलो उद्देश्य लिएपछि नै त्यसलाई प्राप्त गर्ने हो। कोसिस नगरेसम्म जीवन सफल हुन पनि सक्दैन। मिस नेपालको ताज जित्नु पनि मेरो लागि आकाशको फलजस्तै थियो। पछि मैले मिहेनत गरेरै हासिल गरेँ।
२. इन्द्रको अगाडि स्वर्गको बयान
कहिलेकाहीँ अचम्मका मानिसहरू भेट हुन्छन्। उनीहरूको नैटंकी यति हुन्छ कि नजानेको कुरामा पनि विवाद गर्छन्।
३.हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा
मिस नेपाल हुनुअघि साथीहरूसँग मिलेर के के गर्ने भनेर तयारी गरेका थियौँ। पछि त सबै योजना कता पुग्यो थाहै भएन। अन्तिम अवस्थामा मिस नेपाल घोषित भएपछि साथीहरूसँग रमाइलो गर्ने अवसर कम पाएकी छु।
४. लोग्नेस्वास्नीको झगडा परालको आगो
मेरा मामुबाबाको कहिलेकाहीँ हुने सानोतिनो भनाभन सम्झन्छु। घरमा मामु र बाबाको झगडा पो भयो कि भनेर हेर्‍यो भने कति खेर मिलिसकेको हो पत्तै हुँदैन।
५.अगुल्टोले हिर्काएको कुकुर बिजुली देखी तर्सिन्छ
कहिलेकाही एसाइनमेन्ट नगर्दा सरको गाली खाइन्छ कि भनेर डर लाग्छ। स्कुलमा होमवर्क नगर्दा गाली खाइन्थ्यो। म प्रायः सबै कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु। त्यसैले यस्ता कुरामा धेरै आतिन्न।
६.अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन
राम्रो कुराको प्रशंसा जति गरे पनि कमै हुन्छ। मेरो विचारमा सबै मान्छे सुन र चादँी जस्तै छन्। सायद मान्छे आफैमा नराम्रो हुँदैन होला। कहिलेकाहीँ परिस्थितिले मान्छेलाई नराम्रो बनाउने हो।
७. आगो ताप्नु मुढाको कुरा सुन्नु बूढाको
बूढापाकामा प्रविधिको ज्ञान कम भए पनि बोलाइको प्रभाव उत्कृष्ट हुन्छ। म मेरो अभिभावकको कुरा सधैं सुन्छु। कहिलेकाहीँ दिक्कै लागे पनि उहाँहरूले मेरो भलो नै सोचेका होला भनेर केही भन्दिन।
८.कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर
युवापुस्तामा चाँडै पैसा कमाउने र उन्नति गर्ने इच्छा हुन्छ। उनीहरूले विभिन्न काममा एकैपटक हात हाल्छन्। फलस्वरूप सबैमा राम्रो नतिजा ल्याउन सक्दैन। बरू एउटै काम बुझेर गरे, त्यसमै दक्ष हुन सकिन्छ।
९. जब राती बूढी ताती
सभासद्हरूले रात परेर बिहान भइसक्दा पनि संविधान लेख्न सकेका छैनन्। तोकिएको समयमा काम गर्न अल्छी गर्ने नेपालीहरूका महाअल्छी सभासद्ले अब राम्रो संविधान लेख्छन् भन्नेमा विश्वास गर्न नसकिने भएको छ। अन्तिम अवस्थामा पनि काम नगरे कस्तो नतिजा आउला र?
१०. घाँटी हेरी हाड निल्नू
दसैंतिहारमा रमाइलो गर्ने उद्देश्यले धेरै खर्च गर्दा नेपालीहरूले दशा खेप्छन्। अरूको देखासिकी गरेर आफ्नो आम्दानी भन्दा बढी पैसा उडाउँछन्। नेपाली परिवेशमा यो उखान व्यंग्यात्मक छ जस्तो लाग्छ।